Dear Zawgyi user !!
Please read this instructions and you will be OK with Unicode in Windows Operating System.
သင့်အနေဖြင့် ဝင်းဒိုးတွင် ယူနီကုဒ် အသုံးပြုချင်လျှင် အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ.. သင်အဆင်ပြေ အိုကေသွားပါလိမ့်မည်..
Windows မှာ မြန်မာယူနီကုတ် ကို အသုံးပြုချင်သူများအတွက် နည်းလမ်းများနဲ့ အမှန်မထင် ကြုံတွေ့လေ့ရှိတဲ့ အခက်အခဲများကို အောက်မှာ လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်... အခက်အခဲရှိရင် phoehtt@gmail.com သို့email ပို့မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း ....
Windows မှာ ယူနီကုဒ် ထဲ့သွင်းရတာ အလွယ်ကူဆုံးပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ ဖောင့်များသည် Unicode စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အပြည့်အဝလိုက်နာသော ဖောင့်များဖြစ်သဖြင့် မိမိစက်အတွင်း ၎င်းဖောင့်များတစ်ခုခုရှိနေရုံမျှဖြင့် မည်သည့် Unicode စာသားများကိုမဆို ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်...
(က) (PyidaungSu Font
(ခ) Myanmar3Font (တိုင်းရင်းသားစာများ မပါ) ၊ ဒေါင်းလုဒ်လင့်
(ဂ) သာလွန်ဖောင့် ဒေါင်းလုဒ်
TharLon Font (Burmese, Mon, Shan, Karen, Pa'o, Asho Chin, Kayah and Karenni)
(ဃ) အခြားယူနီကုဒ်ဖောင့်များ ဒေါင်းလုဒ်
(က)သင်ပုန်းကြီးအတိုင်းရိုက်ချင်ရင် KeyMagic က မြန်စံ လက်ကွက် ကို သုံးပါ။
(ခ)Windows 8 , 8.1 တွင် Unicode စည်းမျဉ်းအတိုင်း ရိုင်နိုင်သည့် မြန်မာလက်ကွက် အလိုလျှောက်ထည့်သွင်းပြီးသားဖြစ်သည်.. ထို့ကြောင့် Control panel > Language ထဲသိုသွား၍ Add Languages ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ.. ထို့နောက် ရှာဖွေသည့် Search နေရာတွင် burmese ဟု ရိုက်၍ ရှာဖွေပါ.. မြန်မာစာ / Burmese ဆိုသည်ဖိုင်လေးပေါ်လာသည်ကိုတွေ့လျှင် ၎င်းအားရွေးချယ်၍ Add ကို နှိပ်လိုက်ပါက မြန်မာစာ Unicode စာရိုက်စနစ်ထည့်သွင်းပြီးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်.. စာရိုက်လိုပါက Alt + Shift ဖြင့် ပြောင်းပြီးရိုက်နိုင်ပါသည်။
(ဂ) Windows XP ,7တို့တွင် Window 8 မှာပါသည့် ကီးဘုတ် လက်ကွက်အတိုင်း အသုံးပြုချင်ရင်
ယူနီကုဒ် စာလုံးစီပုံအတိုင်းရိုက်နိုင်တဲ့ ကီးဘုတ်ဒေါင်းလုဒ်
Menu button > Settings > Show Advanced Setting > Web content ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Customize Font ကိုနှိပ်ပြီး Sans-serif Font နေရာမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့် တခုခု ရွေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ Encoding ကို Unicode(UTF-8) ပြောင်းထားပါ။
***Mozilla Firefox အသုံးပြုသူများအတွက်
၁) ** အရင် က PC Viber သုံးလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် GTalk သုံးလို့ပံ ဖြစ်ဖြစ် ဇော်ဂျီစာ မြင်ရဖိုအတွက် နိုဂို စက်ထဲပါသော Arial ဖောင့်ကို Zawgyi နဲ့ အစားထိုးထားသည်များရှိပါသည်။ ထိုarial Zawgyi ဖောင့်ရှိပါက မည်သည့်နေရာတွင်မှ မြန်မာယူနီကုဒ်စာများ မမှန်ကန်ပါ။ Addon များမှာလဲ အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါသည်။
၂) ** Arial ပြန်ထဲ့ရုံဖြင့် အဆင်မပြေသေးပါက PC Viber နောက် version အတွက် mmsd-viber.ttf ကို ထည့်ထားတာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Control Panel > Fonts > ထဲမှာ KaYin2014 ဆိုတဲ့ ဖောင့်ကို ရှာပါ။ တွေ့လျှင်ဖျက်လိုက်ပါ။ အပေါ်ကအတိုင်း ယူနီကုဒ်စာများ မြင်ရလား စစ်ပါ။ မမြင်ရသေးလျှင် Restart ချကြည့်ပါ။ မြင်ရလျှင် ပြီးပါပြီ။
၃) ** အပေါ်က ၂နည်းအတိုင်းအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလျှင်
*** Window 8 တွင် ဆိုလျှင်
၄) ** Chrome အတွက်ဆိုလျှင် တော့ ဒီအဆင်တွေ ပြီးရင် ရသင့်နေပါပြီ။
REF : ဆန်းလင်းနိုင်
Font tools Tutorial